theZOMI: Re: [mrsorcerer:37869] သိနားလည်သူများ ရှင်းပြကြပါဦး။
Re: [mrsorcerer:37869] သိနားလည်သူများ ရှင်းပြကြပါဦး။
အဲဒါကိုတစ်ကယ်ပေါက်တယ်လို့ယူဆပီး သူတောင်းတဲ့ အင်ဖောမေးရှင်းတွေပေးလိုက်ရင်..
ဒါပေမယ့်ဒီမှာကံကောင်းတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာခရက်ဒစ်လိုမျိုး အွန်လိုင်းကဒ်တွေတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မသုံးနိုင်သေးတော့.ယုံပီး..လောဘတက်ပီး.ပေးချင်ရင်တောင်ပေး
ကံစမ်းမဲဆိုတဲ့ပေါက်တဲ့ပစ္စည်းကို ပို့ပေးမယ့်ကယ်ရီစရိတ်ဖြတ်ဖို့ ..စသဖြင့်ပေါ့..
ပီးတော့ တကမ္ဘာလုံးကလူတွေကိုပတ်လိမ်နေတာဆိုတော့ အဲလိုလုပ်ကြသူတွေဟာ..သူတို့ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ထဲကို ပိုက်ဆံတွေ
2013/4/10 Lu Bo <lubo601@gmail.com>
ဒီလိုမျိုး အီးမေးထဲရောက်လာပါတယ်ဗျာ။ သိနားလည်သူများ ရှင်းပြကြပါဦး။ ဘာတွေလဲဗျာ။ နောက်လူများလည်း ဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ပါ။
ATTN: Lu Bo,
Your winnings amount have been deposited with the London Scottish Bank already. so you are to contact them via email : scottishbnk@wss-id.org and provide them your bank details so they can transfer your winning amount into your bank account as soon as possible.
You are to forward scan copy of your International I.D/Driver's License and any of your passport photograph and your bank details to the bank Email for them to transfer your winning prize amount into your bank account. Here is the bank Email Bank Email: scottishbnk@wss-id.org
Officer In charge: SIR.MARKIN WALKINE
Bank Site http:http://home.e-londnscottishbnk.com/
Bank Email: scottishbnk@wss-id.org
Note :You have to keep this confidential until your fund is transferred to your local bank account. Also Note that after your funds is been transferred into your bank account, our diplomat shall deliver your2HP laptop to your home address in your country.
Mr. Thomas Alfred
Google Award Lottery House™ <g9.9@msn.com>